मोबाइल फोनबाट निस्कने रेडिएसनको असर कहाँ–कहाँ ? – hamrosandesh.com
मोबाइल फोनबाट निस्कने रेडिएसनको असर कहाँ–कहाँ ?
मोबाइलबाट निस्कने विकिरण (रेडियसन) स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुने सबैलाई ज्ञान छ । तर, बाध्यता वा रहरले मोबाइललगायत ग्याजेटमा घन्टौँ बिताउनेहरू धेरै छन् । अझ कोरोना महामारीपछिको लकडाउन अवधि र वर्क फ्रम होमले मोबाइल र अन्य इलेक्ट्रोनिक ग्याजेटहरूलाई अभिन्न सामग्री बनाइदिएको छ ।
यो डिभाइसले कार्यशैलीमा त परिवर्तन ल्याइदिएको छ, तर सँगै यस्ता डिभाइसबाट निस्कने विकिरणले स्वास्थ्यमा पनि गम्भीर असर परिरहेको अध्ययनहरूले देखाएका छन् ।
चिकित्सकहरूका अनुसार मोबाइल तथा अन्य ग्याजेटमा अत्यधिक समय बिताउँदा यसबाट निस्कने रेडिएसनले विशेषगरी बालबालिकाको स्वास्थ्यमा असर गरिरहेको हुन्छ । आँखा दुख्नु, घाँटी दुख्ने, टाउको दुख्ने, निद्रा नपर्ने, केही कुरामा ध्यान केन्द्रित गर्न नसक्नेजस्ता समस्या लिएर अस्पतालसम्म पुग्नेहरू धेरै नै रहेको चिकित्सकहरूको भनाइ छ । तर, नेपालमा भने यसको असरबारे हालसम्म कुनै आधिकारिक अध्ययनहरू भएको पाइँदैन ।
अल इन्डिया इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्सले हालै गरेको एक अध्ययनअनुसार अत्यधिक मोबाइल प्रयोगका कारण टाउको दुख्ने, निद्रा गडबडी हुने, मेमोरीमा असर पर्ने, चिडचिडाहट, हात दुखाइ, घाँटी दुख्नेजस्ता समस्या सामान्य बन्न थालेका छन् । न्युरोलोजीसम्बन्धी कुनै पनि समस्या नदेखिएका व्यक्तिमा गरिएको क्लिनिकल ट्रायलमा मोबाइलको इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक विकिरणले मस्तिष्कको फ्रिक्वेन्सीमा असर परेको अध्ययनले देखाएको छ । अल इन्डिया इन्सिच्युट अफ मेडिकल साइन्सका प्रमुख न्युरोलोजिस्ट डा. मञ्जरी त्रिपाठीका अनुसार स्वयंसेवकमा दिमागमा विद्युतीय गतिविधि निगरानी गर्ने इइजी अर्थात् इलेक्ट्रोइन्सेफ्लग्रामको विस्तृत मूल्यांकन गरिएको थियो ।
सामान्यतया मस्तिष्कको गतिविधि प्रतिनिधित्व गर्ने अल्फा, बिटा, थेटा र डेल्टा गरी चार किसिमका वेभ हुन्छन् । अध्ययनमा मस्तिष्कको गतिविधि मूल्यांकन गर्न स्वयंसेवकलाई इन्भाइरोचिप दिएर पाँच मिनेट फोनमा कुरा गर्न लगाइयो । अर्को सवयंसेवकमा विनाइन्भाइरोचिप पाँच मिनेट कुरा गर्न लगाएर केही समय आराम गर्न दिइएको थियो । त्यो समयमा आरामको भावनासँग सम्बन्धित वेभ अल्फा र थेटामा विभिन्न किसिमका तरंगहरू भएको पाइएको थियो अर्थात् शरीरमा एक किसिमको तनाव देखिएको थियो ।
२३ फेब्रुअरी २०२० मा जामाले प्रकाशित गरेको अर्को अध्ययनअनुसार मोबाइल प्रयोगले मस्तिष्कमा प्रत्यक्ष असर गरिरहेको हुन्छ । डा. नोरा भाल्को र उनको टिमले करिब ४७ जना स्वयंसेवकमा मोबाइल चलाउँदा मस्तिष्कमा हुने गतिविधि हेर्नका लागि पिइटी स्क्यानर प्रयोग गरेका थिए । फोनमा सक्रिय भएको समयमा स्क्यानरले मस्तिष्कको ग्लुकोजमा केही वृद्धि भएको देखाएको थियो । जसले गर्दा दिमागमा अन्य परिवर्तनहरू देखिने र बिस्तारै समस्या ल्याउन सक्ने अध्ययनको अनुमान थियो ।
मोबाइल फोनबाट निस्कने रेडिएसनले दिमागमा असर पर्ने विभिन्न अध्ययनले देखाए पनि यसले कसरी असर गर्छ भन्ने विस्तृत अनुसन्धान रिपोर्ट भने सार्वजनिक भएको पाइँदैन ।
लकडाउनपछि झन् बढी समस्या
कोरोना महामारीपछि विश्वभर गरिएको लकडाउनपछि मोबाइल तथा ग्याजेटमा सक्रिय हुने क्रम अझै बढेको छ । अधिकांश व्यक्तिले यो अवधिका आफ्ना काम ग्याजेटबाटै गरेका थिए । यसकारण लकडाउनका वेला ग्याजेटबाट स्वास्थ्यमा हुने असर अझै बढेको न्युरोलोजिस्ट डा. जया सत्याल बताउँछिन् । उनका अनुसार यसको असरबारे ध्यान नदिने हँुदा समस्या गौण बनिरहेका छन् । तर, आँखा दुख्ने, निद्रा नलाग्ने, ध्यान केन्द्रित गर्न नसक्नेजस्ता न्युरोलोजिकल डिसअर्डरहरू मोबाइलको अत्यधिक प्रयोगबाटै हुने गरेको पाइन्छ । उनी भन्छिन्, ‘यस्ता समस्या लिएर बढीजसो बालबालिका अस्पतालसम्म आउने गरेका छन् । लकडाउनको समयमा यस्तो समस्या बढी भएको अनुमान छ । कोभिडका कारण अस्पतालसम्म पुग्ने केसहरू कम भए पनि यसले भविष्यका जटिल समस्या निम्त्याउने अनुमान गर्न सकिन्छ ।’
मोबाइल रेडिएसन किन हानिकारक ?
डा. सत्यालका अनुसार मोबाइल रेडिएसनले मस्तिष्कको क्यान्सर, ट्युमर भएका घटनाहरू छन् । तर, यसबारे विस्तृत अध्ययन भने भएको पाइँदैन । मोबाइलको रेडिएसनले मात्र नभई यसको लतले सम्पूर्ण स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर गरिरहेको हुन्छ ।
मोबाइलको विकिरणले मस्तिष्कलाई दुई तरिकाले असर गरिरहेको हुन्छ । पहिलो मोबाइल कानमा राख्दा यसको तापले कानको स्नायुलाई सीधा असर गरिरहेको हुन्छ । अर्थात् एक घन्टा मोबाइल चलाउँदा दिने ताप, एक मिनेटमा माइक्रोवेभले दिने तापबराबर हुन्छ ।
दोस्रो, जैविक असर हो । अर्थात् शरीरका कोषहरू सञ्चारका लागि एक–अर्कासँग जोडिएका हुन्छन् । मोबाइल चलाउँदा रेडिएसनले यसमा बाधा पारिरहेको हुन्छ । अर्थात् रेडिएसनले शारीरिक प्रणालीलाई बाधा पु¥याउँदा कोषहरूले सञ्चार गर्न बढी मिहिनेत गर्नुपर्ने हुन्छ ।
बदलिँदो जीवनशैलीसँगै मोबाइल फोन अत्यावश्यकजस्तै भइसकेको छ । योसँगै यसका असरबारे चासो नदिँदा स्वास्थ्य समस्या पनि बढिरहेको चिकित्सकहरू बताउँछन् । सुत्ने वेलामा मोबाइल सिरानीमा नराख्न, फोनमा कुरा गर्दा सकेसम्म कानबाट टाढा राख्न वा अन्य डिभाइसको प्रयोग गर्न, बालबालिकालाई फोनको प्रयोग घटाउन वा यसले पार्ने असरको नियन्त्रण उपाय अपनाउन न्युरोलोजिस्टहरू सल्लाह दिन्छन् ।